-जम्बाला लामा- अर्थात नेपाल महलको रक्षक (चौकिदार) २०७४ को आम निर्वाचनबाट जनताले मत जाहेर गरी चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरु हुन्। यी संघीय सांसदबाट प्रत्यक्षमा १ सय ६५ र समानुपातिक तर्फबाट १ सय १० समग्रमा २ सय ७५ जना सांसदहरु चुनिएको थियो । र प्रदेश सभालाई पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट ३ सय ३० र समानुपातिक तर्फबाट २ सय […]
रक्षा नेपाल र दिक्षा सिटौला / (काठमाडौ स्कुल अफ ल) नेपाली समाजमा महिलाहरुको हकहित संरक्षण, संवर्धन तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गरी महिलाको पहुँचमा ल्याउनका लागी विभिन्न किसिमका ऐन, कानुन र नियमहरुको तर्जुमा गरिएका छन्। जस्तैः घर, परिवार, समाजमा घट्ने गरेको अमानवीय, अपमानजनक, हिंसाजन्य कार्य रोक्न घरेलु हिंसा ऐन २०६६; सामाजिक कुरिति तथा अन्धविश्वास निवारण गरी […]
बितेका चार दसकमा चीनले हासिल गरेका सफलताले चिनियाँ जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो र चीनले संसारको भूराजनीतिमा पुनः केन्द्रीय स्थान हासिल ग-यो । यस्तो परिस्थितिमा तङको सुधार र खुलापन नीतिको चालिसौं वर्षगाँठ मनाउने एउटा तरिका हाम्रो समयका केही महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्ने हुनसक्छ । के प्राचीन गैर–पश्चिमा सम्भ्यताको पुनःउदय ध्वंसकारी होला ? अथवा यसले […]
-जम्बला लामा-(बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रिय सदस्य) अर्थात् धर्म भनेको खोजर पाउने होइन किन भने खोज्ने चिज हो हाम्रो साथबाट हराएको वस्तु हो । त्यो वस्तु पनि अमूल्य वस्तु हो भने पाउनलाई गाह्रो हुन्छ । त्यो वस्तु अरु कुनै व्यक्तिलाई मिलिसकेको हुन्छ । त्यसकारण पाउनुलाई बडो मुस्किल हुन्छ बहुमुल्य वस्तु त्यसैले उदाहरणको […]
-रीता बुढाथाेकी- काठमाडौंमा ट्याक्सीको विगविगी छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि भएका सार्वजनीक यातायात भनेको समयमा नपाईने पाए पनि यात्रा असाध्यै असुरक्षीत र ढिला हुने कारणले ट्याक्सी लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर ट्याक्सी चलाउनेहरुले यस्तो मनोमानी गर्दछन् की उनीहरु तोकीएको मिटरको भाडादरमा जानै मान्दैनन् । मंगलबार यस्तै एक घटना घटेको छ । हिजो […]
-रवीन्द्र श्रेष्ठ- अर्थमन्त्रीले पुनः झुठो तथ्यांक दिएर आफ्नो पालामा नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको देखाउन खोजेका छन् । वेलायत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्—“अहिले ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भइरहेकोछ । इतिहासमा पहिलो पटक त्यति आर्थिक बृद्धि हासिल भएको हो ।” तर विश्व बैंकको तथ्यांकले अर्थमन्त्रीका दावीहरु झुठा सावित हुन्छन् । विश्व बैंकको […]
अाशिष थापा, काठमाडौं, ११ फागुन – समुद्रको जीवलाई सोध्न मिल्छ भने सोध्नु, जीवन के हो ? उसको उत्तर हुनसक्छ, चारैतिर पानी नै पानी छ, जीवन जल नै हो र जल नै जीवन हो । तब उसलाई भन्नु जीवन के हो, व्याख्या नगर, भन मात्रै, त्यो क्षण केही असहज हुन सक्छ । सबैभन्दा प्यारो वस्तु जीवनको विवेचना […]
-जम्बला लामा- यस्तै भइरहेको रहेछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा । आफै रहेछ ठूलो माछा अर्थात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानकै भ्रष्ट आयुक्त राजनारायण पाठक । आफै पो रहेछ ठूलो माछा । बल्ल जनताले थाहा पायो की ठूलो माछा किन नसमातेको भनेको त अख्तियार आफै रहेछ ठूलो माछा । अर्थात अख्तियार आफै रहेछ भ्रष्टाचारको मुल जग नै, अनि कसरी […]
-दिपक ज्ञवाली – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उदघाटन गरेपछि अहिले जताततै यसको चर्चा छ। पानीजहाज कहिले आउँछ र कसरी आउँछ भन्नेमा आममानिसको चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रेलभन्दा पहिला पानीजहाज ल्याउने बताएका छन्। पुल उचालेर भए पनि पानीजहाज ल्याउने उनको तर्कलाई कतिले पत्याएका छैनन्। सरकारले कसरी पानीजहाज चलाउन सकिन्छ प्रष्टसँग […]
-नारायण पाैडेल- कुरा आजभन्दा चानचुन ३ सय बर्ष पहिलेको हो । संयुक्त अधिराज्यको सामाजिक राजनीतिक अवश्था विचित्रको थियो । समाजमा चरित्रलाई अत्याधिक महत्व दिइन्थ्यो । समाज कूल घराना, गरिव र असहायका बीचमा विभक्त थियो । चरित्रलाई प्रधान ठान्ने समाजमै वेश्यालय व्याप्त थिए । तिनै वेश्यालयबाट प्रतिष्ठित परिवारका पुरुष सदस्यका ससर्गबाट बच्चा पैदा हुन्थे । ती […]